Tatuantes ndeye webhusaiti yeActualidad Blog. Yedu webhusaiti yakatsaurirwa ku nyika yehunyanzvi hwemuviri, kunyanya kumatato asiwo kubaya uye dzimwe nzira. Isu tinopa mazano ekutanga isu tichida kupa ruzivo rwese nezve maitirwo enyora, kutarisirwa kweganda, nezvimwe.
Dare rekunyora reTatuantes rakagadzirwa ne anodisisa nezve nyika yematatoo uye hunyanzvi hwemuviri vanofara kugovana ruzivo rwavo uye ruzivo newe. Kana iwe zvakare uchida kuve chikamu chayo, usazeze kuita tinyore isu kuburikidza neichi fomu.
Kwemakore mazhinji ndanga ndichida nyika yetattoos. Ndine akawanda uye akasiyana masitaera. Tsika yechinyakare, Maori, chiJapanese, nezvimwe ... Ndosaka ndichivimba iwe unofarira izvo zvandichatsanangura nezveumwe neumwe wavo.
Mufariri weiyo neo-yechinyakare dhizaini uye zvisingawanzo uye zvisina kujairika nyora, hapana chakafanana nechidimbu chine nyaya yakanaka kuseri kwayo. Sezvo ini ndisingakwanise kudhirowa chero chinhu chakaomarara kupfuura chidhori chedanda, ndinofanira kugadzirisa kuverenga, kunyora nezvazvo ... uye kuzviitira ini, hongu. Anodada mutakuri wevatanhatu (nzira yechinomwe) nyora. Kekutanga nguva yandakatemwa nyora, ndakanga ndisingakwanise kutarisa. Nguva yekupedzisira, ndakarara pa gurney.
Amai vane nyora, mudzidzisi anokosha wezvedzidzo, psychopedagogue uye anofarira zvekunyora nekutaurirana. Ini ndinoda ma tattoo uye pamusoro pekupfeka iwo pamuviri wangu, ndinofarira kutsvaga nekudzidza zvakawanda nezvazvo. Imwe neimwe tattoo ine chirevo chakavanzika uye inyaya yemunhu ... yakakosha kuti uwane.
Sezvo ini ndaive mudiki, ndaive pachena kuti chinhu changu kwaive kuve mudzidzisi, asi pamusoro pekugona kuzviita chokwadi, zvinogona zvakare kusanganiswa zvakakwana nechangu chimwe chishuwo: Kunyora nezve nyika yematatoo uye kuboora. Nekuti ndiko kutaura kwekupedzisira kwekutakura ndangariro nenguva dzakararama paganda. Ani naani anova mumwe, anodzokorora uye ini ndinozvitaura kubva pane zvakaitika!
Ini ndine shungu nezve zvese chaizvo zvine chekuita nematato. Masitaera nemaitiro akasiyana, nhoroondo yavo ... Ndine shungu nezve izvi zvese, uye icho chinhu chinoratidza kana ndichitaura kana kunyora nezvazvo.
Ini ndiri munhu agara ane shungu nematatoo. Kuziva nezvavo, iyo nhoroondo, tsika, uye maitiro ekuvachengeta iwo hobby yandinoda. Uye zvakare kugovana ruzivo rwangu kuti iwe ugone kunakirwa
Ini ndakazvarwa muBarcelona makore makumi matatu nemasere apfuura, akareba zvakakwana kuti munhu anongozivawo uye asina hanya kuti anakidzwe nekudzidza nezvematattoo uye nekukosha kwaakaita mutsika dzepasirese. Zvakare, iwe unotoziva kare kuti "hapana njodzi hapana kunakidzwa, hapana kurwadziwa hakuna kuwana" ... Kana iwe uchida kuziva zvese nezve matattoo, ndinovimba unofarira zvinyorwa zvangu.
Chandinofarira kufarira matatoo. Parizvino ndine 4 (anenge ese mageeks!) Uye nemaitiro akasiyana. Ini ndicharamba ndichiwedzera huwandu kusvika ndapedza mazano andinayo mupfungwa. Zvakare, ini ndinoda kuziva mavambo uye zvinoreva matatoo.